Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso
Kugcine ukubuyekezwa September 21, 2019
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yombono weBhola ngesiteketiso “UMandela”. Indaba yethu ye-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo kanye nokuvuka kuka-Erling Braut Haaland. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram ne Ama-skysports.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nomkhosi wakhe wokukhumbula inhloso. Kodwa-ke yidlanzana kuphela elibheka i-Biography ka-Erling Braut Haaland okujabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
U-Erling Braut Haaland wazalwa ngosuku lwe-21st lukaJulayi 2000 edolobheni laseLeeds eNgilandi. Wayengowesibili ezinganeni ezintathu azalelwa umama wakhe, uGry Marita nakuyise u-Alf-Inge Harland.
Abazali baka-Erling Braut Haaland u-Alf-Inge noGry Marita. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Isizwe saseBrithani nesaseNorway sobuzwe abamhlophe abanezimpande ezincane ezaziwayo sakhuliswa kakhulu edolobheni laseBryne eRogaland, eNorway lapho sakhulela khona kanye nomfowabo omkhulu, u-Astor Haaland nodadewabo, uGabrielle Haaland.
Ukukhula eBryne eRogaland: isithombe esingajwayelekile sika-Erling Braut Haaland nomfowabo omdala u-Astor Haaland. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukukhula eBryne eNorway, iHaaland encane yayiyingane ethanda ubumnandi futhi inamandla futhi idlala ibhola nabangane bayo ngokwenkolo. Ngaphezu kwalokho, umdlalisi webhola osemusha wayenezintshisekelo zemisebenzi ehlukahlukene yomzimba kufaka igalofu, imidlalo yemidlalo kanye nebhola lezandla.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi i-Haaland isineminyaka eyi-6 ku-2006, yathatha isinqumo sokugxila ebholeni futhi yabhaliswa eqenjini lendawo iBryne Fotballklubb lapho yathatha khona umbono othandwayo wokuba ngumdlali webhola lomhlaba owedlula zonke emhlabeni.
Kepha ngokungafani nabaningi abahamba phambili emhlabeni ”iHasaland yayizimisele ngokuphelele ukwenza noma yini edingekayo - kubandakanya nokuzivocavoca ejimini - ukuqinisekisa ukuthi yenzeka ngezinto ezingafani namaphupho akhe.
U-Erling Braut Haaland - kusukela esemncane kakhulu - wayekulungele ukwenza noma yini ethathayo ukufeza amaphupho akhe ebholeni. Isikweletu Sezithombe: VG.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenxa yokubonga kokuqala kokuncintisana kukaHaaland, uqophe inqubekela phambili ngokushesha ngezigaba zikaBryne Fotballklubb futhi wenza isikwati sakhe seqembu eliphakeme leqembu njengomuntu oneminyaka engu-15 ngoMeyi 2016.
Ukunyuka kweBryne FK kwakungekho ngaphandle kwezingqinamba ku-Erling Braut Haaland ozikhandlayo. Isikweletu Sezithombe: VG.
Akubanga isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ukwenziwa kwebhola lezinyawo komdlali webhola lezinyawo kudonsele umxhwele ama-talent scouts avela kuMolde Soccerklubb omlethe kwiklabhu ephezulu ye-Norwich club e-2017. Kubonakala kuvumelanisa izintshisekelo zeHaaland, uMolde wasiza ekuqhubekeni kwenqubekela phambili yomfana ngokumenza adlale futhi aqeqeshe neqembu leqembu A.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Kodwa-ke, iHaaland ibingazimiselanga ukuhlala isikhathi eside ekilabhini, futhi ayizange iphathe kabi ngombono omnandi wokuzijabulisa ovela kuJuventus neBayer Leverkusen okube nemiphumela emibi kakhulu.
Indlela iHaaland ekuthole ngayo, isikhathi sokudlala ihumusha kunani elingeyona imali elanamathiselwe kuye. Ngakho-ke, akazange akushaye indiva okuvela emaqenjini amakhulu futhi wasayinela i-FC Red Bull Salzburg, okuthi kuzo zonke izinhloso nezinhloso, - abe nendawo efanelekile yendawo yakhe yokuguqula udumo.
Ukuguqukela ekubeni nodumo: U-Erling Braut Haalands usayine neFC Red Bull Salzburg ngo-Agasti 2018. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ukufika kweSalzburg ngoJanuwari 2019, bekungekho mkhawulo kulokho iHaraland engakuzuzisa kuyo yonke ikilabhu nezwe. Ukuqala ngamaqhawe womhlaba wonke womgadli, wasiza ithimba laseNorway i-U20 ukuthi iphumelele ukunqoba izaphulelo ezikhathini ze-9 ku-12-0 yabo ngokunqoba iHonduras ngoMeyi 2019. Ezinyangeni ezimbili kamuva, iHaaland yethula okokukhula kwe-hat-tricks yayo kwiSalzburg kuqala ngokuwina kwe-7-1 ibhekene ne-SC-ESV endebeni yase-Austrian.
U-Erling Braut Haaland ushaye amagoli we-9 ukunikeza iqembu laseNorway i-U20 ukunqoba kwabo okukhulu emlandweni. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Uqhubekele phambili nokuqopha amanye ama-hat-trick amabili emidlalweni ye-Austrian Bundesliga ebhekene neWolfsberger AC ne-TSV Hartberg eqeda i-5-2 ne-7-2 ngokulandelana. Isicoco seHakaland hat-trick sathola ukuqashelwa emhlabeni jikelele ngoSepthemba 2019 lapho eshaya kathathu emncintiswaneni wakhe weligi we-UEFA Champions League kwiGenk.
U-Erling Braut Haaland ugubha igoli lakhe lesithathu kwi-UEFA Champions League Debut yakhe. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-feat - eyaba nomthelela ekuwinweni kweSundowns i6-2 kwiGenk - yabona iHaaland yaba ngumuntu wesithathu omncane ukuthola amaphuzu emidlalweni yeligi. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Uyazi ukuthi iHaaland kungenzeka ukuthi ayishadanga ngesikhathi sokubhala? Okusondele kakhulu lapho umgadli athole ukukuqonda ngempilo yakhe yothando lapho achaza ibhola lesipho somdlalo womdlalo njengomuntu amthandayo futhi ehamba naye ebusuku.
Kuyavela ukuthi iHaaland - engenamadodakazi noma amadodakazi ngaphandle komshado - igxile ekwenzeni isenzo sayo esijabulisayo sokushaya amagoli ngaphambi kokuthola intombi yangempela noma yenze uthando lwayo lube esidlangalaleni.
U-Erling Braut Haaland cishe akashadanga ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I-LB ne-Instagram.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Umndeni ubelokhu uthatha indawo phambili empilweni kanye nokukhuphuka kuka-Erling Braut Haaland. Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni wakhe.
Mayelana nobaba ka-Erling Braut Haaland: U-Alf-Inge Harland ungubaba womgadli omangalisayo. Wayengumdlali webhola lezinyawo owayedlalela iLeeds ngesikhathi esemncane waseHaaland futhi waqhubeka nokuhweba kwakhe eNottingham Forest naseManchester City ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Amagalelo ka-Alf-Inge ekuthuthukisweni kweHaaland ebholeni ngeke aqedwe. Usizile ukuqeqesha umgadli kusukela aneminyaka engu-6 kuya lapho abeka khona i-15 futhi uyaqhubeka nokumqondisa ekwenzeni izinqumo ezibalulekile ngekusasa lakhe kwezemidlalo.
Mayelana nonina ka-Erling Braut Haaland: Umama weHaaland ukhonjwe njengoGry Marita. Uyilungu lomndeni eliyimfihlo kunazo zonke elinegama lakhe elingaphumi ezenzakalweni eziphawulekayo zempilo yokuqala yalowo umgadli kuze kube yimanje. Ngaphandle kwalokho, wasiza ukukhulisa uHaaland nezingane zakubo ngendlela enempilo futhi wathandazela ngasese impumelelo yabo ngosuku.
Izithombe ezijikijelile zika-Erling Braut Haaland nabazali - U-Alf-Inge Harland (2nd kusuka kwesobunxele) kanye noGry Marita (2nd kusuka kwesokudla) - kanye nezingane zakwabo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nezingane zakubo ka-Erling Braut Haaland: IHaaland inezingane zakubo ezimbili nje. Bahlanganisa umfowabo omdala u-Astor Haaland kanye udadewabo osemncane uGabrielle Haaland. Yize kuncane okwaziwayo ngazo zombili izingane zakithi, azingene kwezemidlalo njengeHaaland.
U-Erling Braut Haaland nezingane zakubo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nezihlobo zika-Erling Braut Haaland: Ukuqhubekela phambili empilweni yomndeni owandisiwe waseHaaland, akukho marekhodi omkhulu wakhe ongumama noyise ngenkathi kuncane okwaziwayo mayelana nobabekazi wakhe, umalume wakhe nomzala kanye nabazala bakhe ngesikhathi sokubhala.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Khuluma ngobuntu buka-Erling Braut Haaland, uhlanganisa isimo sokuvelela, sokuqina nesinomzwelo seCancer zodiac izici ezihlasimulisayo emhlabeni.
Isidlali esiveza imininingwane engatheni, ephathelene nempilo yaso yangasese neyangasese senza okungcono kakhulu esabelweni sakhe esifanele samahora we-24 ngokubandakanya imisebenzi ethile edlulisela izintshisekelo zakhe nezinto azithandayo. Kubandakanya ukulalela umculo, ukubuka ama-movie nokuchitha isikhathi nabangane nomndeni.
U-Erling Braut Haaland uthanda ukuhlala nabangane nomndeni. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Yize u-Erling Braut Haaland esenenani lemakethe lama- € 12,00 million ngaleso sikhathi sokubhalwa, inani lakhe elifanele lingakaziwa ngaleso sikhathi sokubhala ngenxa yokuthi uneminyaka embalwa nje yokudlala ibhola lezinyawo.
Ngakho-ke, iHaarland ayichithi imali enkulu ngesikhathi sokubhala noma iphila impilo yokunethezeka yabadlali abafezekile abanezimoto ezivamile nezindlu ezibizayo. Kodwa-ke, akungabazeki ukuthi ukuba ngumklami omkhulu kuzothuthukisa amandla akhe okubukisa ngengcebo njengoba kunguye owamukela izinto njalo.
Isithombe sokuphonsa i-Erling Braut Haaland sibonisa ukuthambekela kokugqoka namagajethi we-2016. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Erling Braut Haaland Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ngaphambi kokuqeda indaba yethu yobuntwana i-Erling Braut Haaland, nanti amaqiniso angaziwa noma awafinyeleleki enzelwe ukukusiza ukwazi okuningi ngaye.
Ama-tattoos: Ama-tattoos ayincane kunazo zonke izinkathazo zaseHaaland ngesikhathi sokubhala. Ugxile kakhulu ekuthuthukiseni umzimba wakhe ngokuzivocavoca njalo. Impela uyawakha kahle amasimba futhi angathanda ukubukeka.
U-Erling Braut Haaland akanawo ama-tattoos ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Isizathu ngemuva kwezidlaliso: Igama lakhe lesidlaliso elihlekisayo elithi "The Manbele" lanikezwa yena ukuqaphela ukuphakama kwakhe okuphezulu nokuzethemba adlala ngayo ibhola elimangazayo yize esemncane.
Inkolo: Inkolo kaHaaland namanje ayikaziwa ngesikhathi sokubhalwa njengoba enganikanga izinkomba zokukholwa kwakhe noma kungaba nezingxoxo noma ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke, umfowabo omdala u-Astor wake wabonwa ethatha izithombe endaweni yamaSulumane, intuthuko okusho ukuthi iHasaland ingaba ngumSulumane.
U-Eling Braut Haaland umfowethu omdala eMosque eDubai. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukubhema nokuphuza: IHaaland ayinikezwanga ukubhema noma ngabe ugwayi noma imishini yokuzijabulisa, futhi akakaze abonwe ephuza ngesikhathi sokubhala. Ngempela, angeke futhi aqaphele ngokugcina impilo enhle.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Erling Braut Haaland Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.